Silicone Sealing washer na gasket
Silicone echebe uwe
Na-eduzi Silicone Ngwaahịa
Back nrapado Silicone Ngwaahịa
Ngwa Silicone maka Ngwa Eletriki na Eletrọniki
Akụkụ Silicone maka Nfuli Ikuku na Nfuli Mmiri
Ngwa Ngwa Ọgwụ
Ọzọ ahaziri Silicone Parts
Ngwaahịa na Prototyping
Ebu Design & Manufacturing
Silicone & Rubber Parts echepụta
Ihe omuma ihe omuma
Nyocha na Akụrụngwa Ule
Mgbakọ na Mbukota Service
Njirimara nke ngwaahịa silicone
site ha na 21-05-25
Nguzogide elu dị elu: ọnọdụ okpomọkụ dị mkpa - 40 ka 230 ℃, enwere ike iji ya na oven microwave na oven. Mfe dị ọcha: ngwaahịa silica gel nke silica gel mepụtara nwere ike weghachite mgbe a sachara ya na mmiri dị ọcha, nwekwara ike kpochaa na asacha efere. Ogologo ndụ: chemical ...
Ngwa nke silica gel ngwaahịa
1. Silicone ngwaahịa ndị dị oké mkpa akụkụ nke na-eme ka copiers, kiiboodu, electronic Akwụkwọ ọkọwa okwu, ime njikwa, ụmụaka na silicone igodo. 2. Ọ ga-eji dị ka inogide akpụ gasket, nkwakọ ihe onwunwe nke electronic akụkụ na mmezi ihe onwunwe nke ụgbọala na kọmputa akụkụ. 3. O nwere ike ịbụ u ...
Iji mgbanaka akara nke silicone na ndụ kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Dịka akara dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ, mgbanaka akara nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mma na mgbochi mmiri, mgbochi mmebi, acid na nguzogide alkali. N'otu oge ahụ, anyị na-ejikarị ya eme ihe na ndụ anyị, dị ka iko mmiri na kọfị. Site na ntoputa nke otutu ihe, otutu uzo di otutu ...
Kedu ihe bụ silicone? Ngwaahịa silicone ọ dị mma?
Na oge nkịtị, ọ na-esiri anyị ike ịchọpụta ịdị adị nke gel silica, mana gel silica juru ebe niile n'akụkụ niile nke ndụ anyị, dịka ngwa ngwa ụlọ, ngwa ọrụ ziri ezi, akwa akwa, nri, ọgwụ na ihe ndị ọzọ. Silica gel nwere ọtụtụ ojiji, yabụ kedụ ihe eji eme ya? Nke ...
Adreesị: Nke 428, Changtian Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province
Ekwentị mkpanaka: 0086-15382826589
Copyright - 2021: All Rights echekwabara.